Vahaolana raha tsy milaza aminao ny fotoana niresahana tamin'i Minnie sy Mickey | ny Apple Watch anao Avy amin'ny mac aho
Vahaolana raha tsy milaza aminao ny fotoana niresahana tamin'i Minnie sy Mickey ny Apple Watch anao
Volana maromaro no lasa ary isaky ny mahita ny tenako manaitra ahy bebe kokoa amin'ilay mpiara-miasa amiko Magüi Ojeda aho. Vao tsy ela akory izay dia nandray ny dingana hividianana marika vaovao ianao Apple Watch amin'ny alimo volamena, Apple Watch Series 2 an'ny 38mm. Hatramin'ny nahazoany an'io dia faly izy fa tsy mahavonjy azy amin'ny fanaovana famantaranandro manome azy aretin'andoha amin'ny fotoana sasany izany.
Andro vitsy lasa izay dia nanapa-kevitra ny hametraka fanavaozana watchOS efa niandry izy ary inona no nahagaga azy fa rehefa nahavita ny fizotrany manontolo ny famantaranandro dia tsy neken'ny iPhone-ny. Nampifandray tamin'ny alàlan'ny Bluetooth izy, nanala ny rohy, namerina ny iPhone indray ary TSY MISY ...
Manoloana an'io toe-javatra io dia nitady ahy tany am-piasana izy ary nilaza tamiko… Pedro! Mila anao aho hanampy ahy amin'ity Apple Watch ity satria tsy azoko atao ny mahita ny iPhone. Taorian'ny fanamarinana marobe dia nanapa-kevitra ny hamafa ny toe-javatra Apple Watch izahay ary manaova rohy vaovao amin'ny iPhone. Taorian'io dia milamina ny zava-drehetra.
Na izany aza, andro vitsivitsy taty aoriana dia nanatona ahy indray izy ary nilaza tamiko fa ny dial an'i Mickey sy i Minnie dia tsy nilaza ny fotoana voalaza rehefa nanindry tamin'ny famantaranandro izy. Tsapany izany satria i Sofía zanany vavy tsara tarehy dia tia mandre ny fotoam-pitenenan'i Minnie ... hehehe Eny, niatrika olana toy izany, Nidina niasa izahay mba hamahana azy saingy taorian'ny fanandramana maromaro dia tsy hitanay ny vahaolana.
Ny tolakandron'io ihany dia nahazo hafatra avy amin'ny mpiara-miasa tamiko aho milaza amiko fa efa manana ny vahaolana izy, izay tena nahafaly ahy satria hitako fa nahavita nitady vahaolana izy na dia tsy nahavita na inona na inona aza. Fa izany rehetra izany no antony Nanapa-kevitra ny hanao lahatsoratra iray aho mba hilazana aminao ny zavatra nataony raha sanatria ka toa izany koa no mahazo anao.
Ny tena izy dia rehefa mampihetsika ny safidy ianao mba hitenenan'i Mickey sy i Minnie ny fotoana itenenana dia tsy ampy ny mampihetsika azy amin'ny Apple Watch na amin'ny fampiharana Watch ary io no ny famantaranandro dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny Internet hahafahana misintona ny maodelim-peo apetrany mba ho re ny feo any aoriana rehefa manindry ny sehatra voalaza. Noho izany, ny zavatra nataon'i Magüi dia nametraka ny Apple Watch hiampanga amin'ny tariby amin'ny fampidirana ary miaraka amin'izay dia nametraka ny iPhone nifandray tamin'ny tambajotra WiFi. Tamin'ny andrana voalohany dia tsy nisy vokany izany, noho izany dia nisafidy ny hamafa ny Apple Watch izy ary hampifandray azy io indray, ary avy eo dia nidina ny modely ho an'ny feo sy nametraka azy ireo ny rafitra, ary nahazo ny spheres Mickey sy Minnie mahatsikaiky tamin'ny feon'izy ireo indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Vahaolana raha tsy milaza aminao ny fotoana niresahana tamin'i Minnie sy Mickey ny Apple Watch anao
adrien fernandez dia hoy izy:
Ny famelana ny famantaranandro mifamatotra sy mifandray amin'ny tamba-jotra mitovy amin'ny iphone raha toa ka bandy 2.4ghz mandritra ny 20 minitra na antsasak'adiny no mamaha ny olana, izaho no niseho voalohany ary rehefa vita ny voalaza etsy ambony dia voavaha ny olana 10 avy amin'ny 10.
Valiny tamin'i Adrian fernandez
Salama Pedro. Toy ny mahazatra, ity dia iray hafa amin'ny lahatsoratranao tsara. Ny andro hafa dia nilaza tamiko ianao fa ho tonga ireo faritra vaovao manana ny endrik'i Disney. Fantatrao rahoviana Oroka lehibe. Oroka
Valiny amin'i SOFIA
Azonao atao koa ny manaraka an'io torohevitra io alohan'ny hanombohana sy hampifandraisana indray.
Tonga lafatra, tsy nandeha teny amin'ny Fri of Minnie na Mickey aho ary tamin'ny famoahana fotsiny ny famantaranandro sy ny fampidirana ireo faritra indray dia re ny feo. Misaotra indrindra anao
Herinandro WWDC, iMac Pro, HomePod sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho